Kuputsa Chibvumirano Chakaipa mfm Pfungwa dzeMunamato | MINYENGETERO MARI
NeChishanu, Gunyana 24, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Kuputsa Yakaipa Sungano mfm Minamato Yekunamata
Kuputsa Yakaipa Sungano mfm Minamato Yekunamata
Zekaria 9: 11-12:
11 Kana newewo, neropa resungano yako, ndakaburitsa vasungwa vako mugomba risine mvura. 12 Dzokerai kunhare, imi vasungwa vetariro; nhasi ndinokuzivisai kuti ndichadzosera zvakapetwa kaviri.
Chibvumirano chinogona kutsanangurwa sechibvumirano pakati pevanhu vaviri kana kupfuura vanhu uye chinowanzo chisimbiswa nechisayina, mhiko, kana ropa. Sungano inogonawo transgenerational, kureva munhu anogona kupinda muchibvumirano chinogona kusanganisira vana vake nevazukuru uye pamusoro. Sungano yaAbhurahama isungano inobereka, ichiri kushanda nhasi, mwana wese waMwari, imbeu yaAbhurahama uye nokudaro mugari wenhaka kumaropafadzo aAbhurahama, VaGaratia 3:29. Sezvatinongoita zvibvumirano zveJeneral zvemakomborero, isu tinewo zvibvumirano zveJeneral generative kutukwa uye zvakaipa. Nhasi tichave tichiita yekuputsa chisungo chakaipa mfm munamato manzwi. Iyi mfm munamato mapoinzi akafuridzirwa nababa Olukoya vegomo remoto uye zvishamiso hushumiro, uyu mfm munamato mapoinzi anokupa simba kuti uputse zvibvumirano zvese zvakaipa zviri kukubata nhapwa.
Njodzi yakaipa isungano, yakaipi zvibvumirano mune mhuri inogona kutungamira kune ese maitiro asina kunaka kuitika mumba. Kana chibvumirano cha satanic chandinotaura mumhuri, mhuri inova panjodzi yekumanikidzwa kwese nekumanikidza kwaSatani. Sungano yakaipa mumhuri mhuri inogona kukonzera zvinotevera pakati pevamwe:
3. Vimbiso uye Kukundikana
5. Kubata pasina chibereko
8. Kunonoka Kuroora
10. Kutanga Kufa
Rondedzero inogona kuenderera nekuenderera, asi apo isu tichiita izvi mfm munamato mapoinzi nhasi zvibvumirano zvese zvakaipa muhupenyu hwako uye mhuri zvichaparadzwa nhasi muzita raJesu.
Regai Mwari vasimuke, uye regai zvibvumirano zvese zvakaipa zviputswa-putswa. Semwana waMwari, uri pasi pesungano imwe uye ndiyo sungano itsva, yakasimbiswa neropa raKristu Jesu. Sungano yega yega yakaderera pane iyi sungano. Ini handina basa kuti ndezvipi zvibvumirano zvakaitwa nemadzitateguru ako nadhiyabhorosi, handina basa nekuti yakareba sei sungano iyi, apo iwe uchiita ichi chinoputsa chakaipa sungano mfm yekunamatira mapoinzi nhasi, ndiri kukuona uchifamba wakasununguka uchibva kune chese chakaipa sungano muzita raJesu. Vatendi vazhinji nhasi vari pasi pemusungo wadhiyabhorosi nekuda kwesungano yakaitwa namadzibaba kana iyo yakaitwa naivo vachiziva kana vasingazive. Ndinonamata kuti tsitsi dzaMwari dzikuwanire nhasi. Shingairira izvi zvekunamatira nemoyo wako wese, zvinamate zvakare uye zvakare, usamire kuzvinamatira kusvikira iwe waona zvibvumirano zvese zvasatani muhupenyu hwako zvichiparadzwa. Sungano yega yega isiri yaMwari iri kushanda muhupenyu hwako nhasi inofanira kuparadzwa muzita raJesu. Enda unogovana zvipupuriro zvako !!!.
1. Baba, neropa raJesu, svibisa pamweya kubva paropa rangu, muzita raJesu.
2. Ndinozvinunura kubva pasungano yega yega yakaipa, muzita raJesu.
3. Ndinonunura musoro wangu kubva kuzvibvumirano zvese zvakaipa, muzita raJesu.
4. Ndinobvisa nhare dzose dzezvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu.
5. Ndinozvinunura kubva pakutukwa kwese kwandakaita, muzita raJesu.
6. Rega ropa raJesu ritaure vachipokana neese akasaziva akashata muhupenyu hwangu muzita raJesu
7. Ndinotaura kuparadzwa kune michero yemweya yetsvina muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
8. Ini ndinotyora chibvumirano chose chakaipa chinobatana, muzita raJesu.
9. Ini ndinogura nhare dzose dzezvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu.
10. Ndinobvisa zvinokonzereswa nehuipi kuwana muropa rangu, muzita raJesu.
11. Ndinonunura mhuri yangu yose kubva kurusungo rwese rwakaita sungano, muzita raJesu.
12. Ndinunura nhengo dzose mumuviri wangu kubva mukubatwa kwesungano yakaipa, muzita raJesu.
13. Ndinozvibvisa ini nemhuri yangu kubva muchibvumirano chenyika yese, muzita raJesu.
14. Ndinozvitsaura kubva pasungano yeropa yega yega, muzita raJesu.
15. Ndinozvibvisa pane imwe neimwe yakagara nhaka ropa ropa, muzita raJesu.
16. Ndinobvisa ropa rangu kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
17. Ndinobvisa ropa rangu kubva kumabhengi ese eropa raSatani, muzita raJesu.
18. Ndinotyora chibvumirano chese chakaipa chisingazive, muzita raJesu.
19. Rega ropa re chero mhuka yadeurwa pachinzvimbo changu nevaroyi nevaroyi kusunungura masimba esungano, muzita raJesu.
20. Rega donhwe rega reropa rinotaura zvakaipa pamusoro pangu, rinyadziswe neropa raJesu.
21. Ini ndinozvisunungura kubva mumubatanidzwa wesungano yeropa pamwe chete, muzita raJesu.
22. Ndinozvisunungura kubva pane yega yega kana kusaziva zvakaipa zvakaipa ropa, muzita raJesu.
23. Rega ropa rekuti chero sungano yakaipa risunungure simba raro pamusoro pangu, muzita raJesu.
24. Ini ndinoraira kukanzura nekubvisa chibvumirano chose chakaipa, muzita raJesu.
25. Rega ropa resungano nyowani ritaure vachipokana neropa rekuti chero chibvumirano chakaipa chakandimirira, muzita raJesu.
26. Ini ndinogashira mvumo yekudzikisira kodzero yezvibvumirano zveropa rose rakaipa, muzita raJesu.
27. Chero chero ropa rakaipa rakaumbwa pamwe ne chero nhengo yemuviri wangu, ngarisimbiswe neropa raJesu.
28. Ini ndinopora zvinhu zvese zvakanaka zvakabiwa nevavengi kubudikidza nezvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu.
29. Rega chero ropa rakashata reropa pamwe newangu mutsara-weropa usagadzirwe, muzita raJesu.
30. Ndinozvisunungura kubva mukutuka kwese kwakanamatira pazvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu.
Ndatenda Jesu nekundisunungura kwakazara Ameni.
Previous nyaya60 Zuva Nezuva Mangwanani Munamato Usati Waita
inotevera30 Mharidzo dzeMunyengetero Unobudirira
Temban Destiny Brightvine Nyamavhuvhu 16, 2019 At 12:16 pm
Pfungwa dzeMunamato Yezvikomborero Mugore ra2020